2. Inona ny RAD140 (Testolone)?
4. RAD140 Stack sy Usage
5. Inona no andrasana rehefa mampiasa RAD140
6. Ny risika sy ny voka-dratsy
7. Ny traikefan'ny mpampiasa
8. Iza no afaka mampiasa RAD140?
9. Aiza no hividianana RAD140?
RAD140 dia fitambarana vaovao, mihamitombo tsikelikely amin'ny maha-be mpampiasa azy ho toy ny sela mpanindrahindran'ny mpifindra-monina, sy SARM ihany koa. Ity vokatra fanafody ity dia natao voalohany indrindra amin'ny fitsaboana ny renirano sy ny homamiadana ao an-damosin'olon-droa.
Raha ilaina ny fisafidianana vokatra fanafody, mila mitandrina tsara ianao. Ny fanananao ny ratsy dia tsy manome vokatra tsy ampoizina ihany fa mbola ratsy kokoa; Mety hiharatsy ny fahasalamanao izany. Ny Phcoker dia manaporofo ny maha-sarobidy azy amin'ny famokarana zava-mahadomelina, ary anisan'izany ny RAD140 (Testolone).
RAD140 dia tambam-bidy vaovao, miakatra tsikelikely amin'ny lazany amin'ny maha-moderna amin'ny fomba mora amin'ny androgen, ary SARM ihany koa. Ity vokatra fanafody ity dia natao indrindra ho an'ny fikarakarana ny fihanaky ny hozatra ary ny homamiadan'ny nono ao amin'ny vehivavy postmenopausal.Ity dia hita tao amin'ny 2010 ary nampiseho famantarana fampanantenana niaraka tamin'ny ankamaroan'ny tatitra sy fandinihana izay hita fa nahomby tamin'ny fitsapana ny fananganana hozatra. Inona koa? The FDA nankasitraka izany.
Raha tsy azonao antoka raha tokony hanandrana azy ianao, ity tatitra RAD140 ity dia mikendry ny hanampy anao hahatakatra ny tombotsoany, ny fiantraikany, ny zavatra andrasana, ary ny dosage mba ahafahanao mandray fanapahan-kevitra mazava.
RAD140 1182367-47-0 dia namono ny fepetra rehetra ho iray amin'ny SARM tsara indrindra any an-tsena. Izy io dia miasa amin'ny fanentanana ny receptors androgen ao amin'ny hozatra sy taolana amin'ny mpampiasa manana fifandraisana ambony kokoa noho ny ao amin'ny rafitra fananganana. Ny antony mahatonga ny lazaina ho mifidy dia noho ny fiheveran'ny proteinina isan-karazany rehefa mamehy ny RAD140. Ny proteinina sasany dia samy hifaneraserany amin'ny mpikirakira androgen mba hahafahan'ny sela sasany manaiky izany amin'ny famoahana proteinina samihafa.
Ny proteinina voavonjy dia hampiroborobo na hanakanana ny RAD140 amin'ny fiantraikany amin'ny mpandoka ny androgen. Amin'ny farany, ny valiny dia ny mpandray ny androgen manerana ny vatan'ny mpiserasera navotsotra fa tsy ny rehetra.
Zavatra iray momba ny RAD140 dia tsy mitovy izany. Ny firafiny dia tsy mitovy amin'ny hormones hafa toy ny testosterone. Manana tombony izany amin'ny fomba izay manakana ny fiovan'ity hormonina ity ho lasa hormonina hafa izay mety hitranga amin'ny fomba tsy azo tsapain-tanana.
RAD140 dia miasa amin'ny alalan'ny famporisihana ny taolana sy ny hozatra rehefa miaro ny prostate sy ny vésil seminal, ireo taova izay tompon'andraikitra amin'ny famokarana sira. Inona koa? Manana poizina amin'ny raty izy io ary tsy mampitombo ny lefona enzymes. Izy io koa dia afaka manetsika ireo receptors androgen ao amin'ny faritra ao amin'ny atidoha izay mety ho simba sy hanatsara ny làlam-biochemika manokana izay tompon'andraikitra amin'ny fanatsarana ny fahasalamana sy ny fampivelarana ny toetr'andro.
4. RAD140 Stack and Uolon-kendry
Misy fomba samihafa amin'ny fampiasana RAD140. Anisan'ireo fananana izay miaraka aminy dia ny fanafoanana ny testosterone kely. Amin'izany fomba izany, dia afaka misafidy ny hampiasa amin'ny herinandro 6-8 ianao. Io angamba no tsara indrindra ho an'ny mpampiasa Nattys sy SARM. Ny kisary 6 ho an'ny Melanotan-II / MT2 izay tokony ho fantatrao
Ny lalana hafa ampiasaina ity vokatra ity dia mampiditra azy io amin'ny tsingerin'ny testa na koa rehefa mandona na mitaiza. Izany fomba izany dia misy tombony sasany toy izany ka manatsara ny vokatry ny fitsapana ary mampihena ny fiantraikany eo amin'ny tsiranoka sy ny vinaingitra ary ny atiny. Tsara kokoa; Izy io dia manampy amin'ny fijery masira mangatsiaka.
Ny toetra mahavariana hafa amin'ity vokatra ity dia ny mahatonga anao hitady vascular kokoa raha tsy misy fiantraikany amin'ny fitsapana na clitoris. Raha ny marina, ny atleta sasany dia nisafidy ny hampiditra izany amin'ny azy ireo PCT tsingerin'ny raha miala amin'ny fitsapana izy ireo. Na izany aza, tsy azo ekena izany satria ny vokatra dia vaovao eny an-tsena ary fampahalalana vitsivitsy ihany no fantatra momba izany. Nisy ireo sasany mifanohitra amin'ny tatitra milaza fa mety tsy hitondra mankany amin'ny fanafoanana ny zava-mahadomelina. Na inona na inona kely ny loza mety hitranga, dia tsara raha avoakany aloha fa tsy fanamarihana faharoa ny vokatra.
Ny dosage 1182367-47-0 nomena azy dia 20-30 mg amin'ny iray andro. Raha vao vaovao ianao, dia manomboka manomboka amin'ny dosage ambany ianao ary hampitombo ny isa arakaraka ny fihetseham-ponao rehefa mandeha ny fotoana. Tokony hanamarika ihany koa ianao fa tsy sahala amin'ireo SARMS hafa mety haka fotoana ela alohan'ny handosirany anao, miaraka amin'ity iray ity, dia hanomboka hahatsapa sy hahita ny vokatra ianao ao anatin'ny herinandro.
Amin'ny ankapobeny, ireo fomba telo ampiasaina azy ireo dia;
Testolone RAD140 dia azo ampiasaina irery na amin'ny ampahan'ny RAD140stack. Ho an'ny lehilahy, ny dosie nomeny, amin'ity tranga ity, dia 5 amin'ny 20 mg isan'andro. Tsy tokony hihoatra ny 30mg. Raha toa ianao ka manapa-kevitra ny hitondra izany tahaka izao; Ny herinandro voatondro dia 12 hatramin'ny herinandro 16. Avy eo dia makà 6 mankany amin'ny fiatrehana 8 ao anatin'izany ny tsingerin'ny post.
Ny votoatiny dia miasa tsara amin'ny SARM rehetra. Azonao atao ny misafidy ny haka azy amin'ny LGS raha toa ianao ka manangom-bola na Cardarine raha toa ianao ka manapaka. Raha ny tanjona dia ny maka an-keriny na mivoaka ny ratra iray dia azonao atao ny maka azy Ostarine.
Fametahana amin'ny steroide anabolic
Ny tombony iray amin'ny Testolone RAD140 dia ny hampifangaroanao azy amin'ny testosterone ary ampiasainao izany ho fototry ny tsiranoka steroid anao. Mahasoa izany amin'ny fomba izay manampy amin'ny fampihenana ny vokany.
For cutting - Raha miezaka mampiasa ity vokatra ity ianao mba hikotrosana, ny dosage mety dia 5 amin'ny 10 mg isan'andro. Afaka misakafo am-bolana miaraka amin'ny fisotroana na sakafo ianao. Mahasoa izany satria manampy ny vatanao handevona azy io mora kokoa amin'ny rà. Ny fepetra azo itokisana mandritra izany dia ny 8 hatramin'ny herinandro 12.
Ho an'ny fanangonana sy fananganana indray - Raha mitady ny fanorenana rà ve ianao na te hampiasa ity vokatra ity ho an'ny tanjon'ny tanjaky ny hozatra, dia ny 15 hatramin'ny 20mg isan'andro no nomena azy. Mora ny mandray, ary azonao ampiasaina amin'ny sakafo na fisotroanao izany. Ho an'ity fe-potoana ity, ny halavan'ny fihodinana famaranana dia 8 hatramin'ny herinandro 12.
RAD140 ny antsasaky ny fiainana - RAD140 ny antsasaky ny fiainana dia eo anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 18 ora, izay somary fohy kokoa noho ny SARM hafa. Tokony haka azy indray mandeha indray mandeha isan'andro ianao, ary tokony hanomboka iray andro aorian'ny fampiatoana ny fitsaboana amin'ny serasera. Tsy mila manasaraka ny dosage ianao mandritra ny andro, fa tokony haka izany indray mandeha. Tsy misy fiantraikany eo amin'ny fahombiazan'ny fitambarana izay mitondra ity fomba fampiasana ity.
(2) Post therapy
Mpampiasa RAD140 toy ny hozatra sy ny mpanao bakteria dia tokony hampiasa io varo-maizina io. Amin'ny ankapobeny dia hampiasa ny votoatiny izy ireo mandritra ny 8 hatramin'ny herinandro 12. Rehefa tapitra io fotoana io, dia mila mijanona amin'ny fampiasana izany izy ireo ary mamela hormonina hiverina amin'ny natiora voajanahary. Ity dia fantatra amin'ny fitsaboana fitsaboana post (PTC), ary manolo-kevitra ny amin'ny fiarovana ny fiarovana sy ny fampihenana ny loza ateraky ny vokatra hafa tsy ampoizina. FDA no nankasitraka ny HCC ho an'ny fitsaboana ny fiterahana
Ny halavan'ny fitsaboana amin'ny serasera dia mety samy hafa amin'ny mpampiasa iray, fa ny ankamaroany dia mifandray amin'ny vanim-potoana fitsaboana. Raiso ny ohatra nasehon'ny olona iray izay nampiasa ilay fitambarana nandritra ny valo herinandro tsy nijanona. Avy eo dia tokony handray valo herinandro miala amin'ny fampiasana izany izy ireo. Izany tranga izany dia mihatra amin'ireo izay nampiasa izany nandritra ny herinandro 12; Tokony haharitra herinandro 12 ny PCT.
Afaka matoky ianao fa ho tianao ny dingana rehetra. Ho tianao ny fahatsapana sy ny fanovana. Ny maha eo amin'ny tabilao RAD104 dia toa tsy misy testosterone hafa fa amin'izao fotoana izao amin'ny dosage avo lozabe. Tena mendrika izany. Ny sasany amin'ireo fanovana azonao iainana dia;
♦ Mihamatanjaka ny tazomoka
Misy aretina sasany toy ny homamiadana sy ny VIH / SIDA dia miara-miasa amin'ny lozam-pifamoivoizana goavam-be izay miteraka fahavoazana be dia be. Vokatr'izany dia miteraka ny fahasitranana, ny fahalemena, ny reraka rehetra izay mahatonga ny fitsaboana ho sarotra sy tsy hay resena.
RAD140 dia tonga mpamonjy miaraka amin'ny fananganana fananganana hozatra, izay manampy amin'ny taolana sy ny herin'ny tanjaka. Izy io dia miasa amin'ny famerenana ny lanjan'ny fahavoazana sy ny fitomboan'ny harena amin'ny alàlan'ny fitomboan'ny fitomboan'ny taolana sy ny hozatry ny hozatra.
Noho ny fananana voafantina, ny zava-mahadomelina dia mety ho voavolavola amin'ny fanatsarana ny lanjan'ny olona izay manana homamiadan'ny prostate ary ny ampahany tsara indrindra dia ny manao izany tsy misy fanentanana ny fitomboan'ny fitomboan'ny prostate, fa tsy toy ny testosterone. Ity vokatra ity dia mamindra ny ankamaroan'ny vokatra tsara amin'ny testosterone raha kely kokoa ny vokatra hafa. Na izany aza, ny tombontsoan'ny RAD140 dia mbola voaporofo, saingy tsy isalasalana fa afaka manampy amin'ny fitomboan'ny tanjaka izany. Izany dia tratrarina amin'ny alalan'ny fihenanam-pihambahambana ary mampihena ny tavy. Ankoatra izay dia voalaza fa mampitombo ny herim-po sy ny fiaretana amin'ny bakteria mandritra ny fampiofanana matihanina.
♦ Fandaniana matavy
Ny olona izay nampiasa ity vokatra ity dia mitatitra fatiantoka goavambe nandritra ny fotoana, saingy mbola tsy voaporofo izany. Ny fantatra dia azo antoka fa ny RAD140 dia afaka mampitombo indraindray ny fatiantoka matavy sy ny lanjany amin'ny alàlan'ny hozatra mitombo. Izany dia mahatonga azy ho mety ho an'ny olona miezaka ny tsy ho lany amin'ny tsy fahampian-tsakany. Izany dia manampy ny mpampiasa hanatratra izany amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fandefasana molekilina matavy antsoina hoe lipoproteine ​​ambany. Ny fampitomboana ny hozatry ny hozatra dia mety hampitombo ny tahan'ny metabolika izay mampiroborobo ny fatran'ny fatotra.
♦ Tsara kokoa ny atidoha
Eritrereto io zava-mahadomelina io mba hiarovana ny atidoha amin'ny voka-dratsy ateraky ny proteinina amyloid beta. Izany no proteinina izay mandray anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ny Alzheimer. 1182367-47-0 RAD140 dia miasa amin'ny fampihenana ny fihenan'ny proteinina, ny fampitomboana ny fivelaran'ny sela ary ny fampivoarana ny plastique synaptique. Ireo vokatr'izany dia mampiroborobo ny fiovan'ireo androgens amin'ny estrogen sy hormones hafa steroidal.
♦ Miady amin'ny homamiadan'ny nono
Ny RAD140 dia nampiseho valim-panontaniana mahavariana momba ny fitsaboana ny homamiadan'ny nono izay mijery tsara ny androgen sy estrogen. Ny fihinanana fanafody dia mampihena ny fitomboan'ny sela homamiadan'ny kansera, izay azo avy amin'ny fanakanana ny fiantraikan'ny estrogen ao amin'ny vatana. RAD140 dia manakana ny famokarana ESRI, proteinina tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny homamiadana.
♦ Fahatsapana lehibe
Ny vokatra ankapobe amin'ity fitsaboana ity dia fahatsapana hatsaram-panahy. Mahatsiaro ho sariaka ianao, sambatra ary manafoana ny fanahiana. Nanaporofo ny fanasitranana ny Kainate, asine amino izay tompon'andraikitra amin'ny Alzheimer. Ny vokatra dia manatsara toe-tsaina sy fahamalinana tsara kokoa izay ho avy miaraka amin'ny fahasalamana ankapobeny.
♦ Hery tanjaka
Olona maro izay nampiasa azy io dia nitatitra fanatsaràna be teo amin'ny fanondrony an-tampony, indrindra ireo faritra toy ny tratra, ny feny sy ny lamosina.
RAD140 dia mbola vaovao ary nampiasaina ho an'ny tetik'asa fanadihadiana raha tsy misy ny vokatra hafa voalaza. Na izany aza, tsy midika izany fa tsy mety hampidi-doza izany. Azo inoana fa mbola hofaritana ny loza. Tahaka ny zavatra hafa fantatra amin'ny fitarihana ny lanjan'ny testosterone, ny RAD140 dia mety hitondra ny fahafahana miteraka fanandramana tsy ampoizina toy ny;
Ny fiantraikan'ny firaisana ara-nofo
Zava-bidy be loatra amin'ny vehivavy
Mety hitarika amin'ny hafanana sy ny fery
Na izany aza, ny fitambarana dia azo lazaina ho azo antoka tanteraka ho fampiasana. Na dia eo aza ny dosage avo dia avo loatra ny RAD140 tsy misy fiantraikany eo amin'ny ati-pandehan'ny bibikely mandritra ny fanadihadiana. Tsy nisy trangan'ny fampitomboan'ny prostate na ny sponjy estrogen. Amin'izao fotoana izao, ny 1182367-47-0 RAD140 dia soso-kevitra ara-pahasalamana ho azo antoka ho an'ny olona ampiasaina ary tsy hatahotra loatra ny hahazo vokatra tsy niriana.
7. User traikefa
Maro ny fanehoan-kevitra RAD140 avy amin'ny olon-tsotra efa nampiasa izany taloha. Ny ankamaroan'ireo fanamarihana RAD140 ireo dia tsara fa miaraka amin'ny fitarainana vitsivitsy etsy sy eroa. To be a fambolena fanampiny, nitatitra ny olona fa ny vokatra dia manampy amin'ny fampandrosoana ny tavy ary manampy amin'ny fahaverezan'ny tavy. Ny famenon'ny SARM fanampiny dia nanoro hevitra ihany koa fa nanampy tamin'ny fanatsarana ny faharetana, ny fiaretana ary ny hafainganam-pandehanana mandritra ny fanatanjahan-tena mavesatra izay ilaina amin'ny fampitomboana ny tahan'ny fatiantoka matavy sy ny fitomboan'ny hozatra.
RAD140 dia nitatitra ny vokatra fampirantiana amin'ny fotoana fohy kokoa raha oharina amin'ny SARM hafa. Ny mpampiasa dia nahatsapa lanjany be loatra ary nahazoana tombony ho an'ny muscle tao anatin'ny herinandro taorian'ny nanombohan'ny fampiasana azy. Tsara kokoa; Ho an'ireo izay niaina fiantraikany ratsy toy ny fiovan'ny firaisana ara-nofo taorian'ny fampiasana ny vokatra, dia nanjavona tsy ho ela ny vokatra rehefa tsy nijanona intsony izy ireo. Ny ankamaroan'ny famoahana dosie dia eo anelanelan'ny 8 ka hatramin'ny herinandro 12, fa ho an'ny olona sasany, ny vokatra dia lehibe rehefa mampiasa azy mandritra ny efa-tapa-bolana. Ny fotoana alohan'ny fampirantiana ny vokatra dia miankina amin'ny mpampiasa tsirairay, ny haavon'ny fitondran-tena sy ny karazana metabolism. SARM fanampiny ao amin'ny Top 10: SR9009 (1379686-30-2)
RAD140 dia fantatra amin'ny anarana mifangaro ary noho izany fananana izany; Misy fiantraikany kely amin'ny famoahana testosterone. Izany dia mahatonga azy ho tsara ho an'ny vehivavy maniry hahazoana volabe ary manangana hozatra nefa tsy miteraka masculine.
Na dia mifandray amin'ny famotsorana testosterone ambany aza, ny mpampiasa dia tokony hanaraka hatrany ny dosim-pahamendrehana sy ny PTC mba hisorohana ny loza mety hitranga sy ny famokarana hormonina voajanahary. Ny olona sasany dia tia mampiasa RAD140 mandritra ny PTC ary tsy hampiasa intsony ny fampiasana azy mandritra ny fitrandrahana izay tsara satria manampy amin'ny fikolokoloana ny masin'ny vozona nahazo azy nandritra ny dingana.
Maro ireo mpampiasa no miteny fa ity SARM ity no famenoana akaiky indrindra amin'ny steroïde. Midika izany fa tokony hanantena ny hahita fiovana goavana ianao, indrindra amin'ny hozatra sy hery. Tokony hanantena ianao fa hahita fahabangana be dia be.
Ny mpampiasa ihany koa dia faly noho ireo tombontsoa marobe izay tonga miaraka amin'ilay fitambarana, anisan'izany ny maha-izy azy;
Mora ampiasaina izany satria tsy mila tsiranoka ny olona, ​​fa aleo atao am-bava
Manome tombony ara-drariny izany
Tsara ho an'ny fanorenana
Tsara ho an'ny tavy mirehitra
Manahaka ny tombontsoa azo avy amin'ny testosterone, mamoaka ny fiantraikany
Tsy mivadika ho estrogen izany
Mampirisika ny fiaretana, haingam-pandeha ary maharitra izy io
Azo antoka ho an'ny vehivavy
Mety tsara ny karazam-bika rehetra
Io famafazana io dia tsara ho an'ny;
Lehilahy izay manana testosterone ambany ambany vokatry ny fanararaotana ny steroids anabolic na noho ny fahasalamana toy ny hypogonadism
Ireo olona mampiasa diabeta steroid ary maniry ny hampifanditra ny elanelana eo amin'ny faribohitr'izy ireo mba hitazonana ny fandrosoana toy ny fandrosoana amin'ny hozatra tsy misy fiantraikany amin'ny taova hafa
Ireo atleta bodybuilders izay maniry hanatsara ny fahombiazany, saingy te hisoroka ny fiantraikany amin'ny vokatra hafa amin'ny fampiroboroboana nentim-paharazana
Lehilahy izay mahatsapa ny gnecomastia
Vehivavy maniry hahazo ny hozatra nefa tsy mijery masculine
Vehivavy manana homamiadana
9. Aiza ny buy RAD140?
Raha mitady vady RAD140 ianao ary ny loharanom-bola SARM tsara indrindra, tokony ho azo antoka fa ho azonao avy amin'ny mpamatsy azo itokisana izy. Manjary sarotra ny vokatra raha mijery ny lazany sy noho ny lalàna ara-dalàna. Izany dia nitarika ny fiakaran'ny isan'ny mpamatsy tonga hitaky ny hananana izany, ary raha tsy mitandrina tsara ianao, dia mety hiafara amin'ny vokatra sandoka. Etsy ankilany, Phcoker dia manana ny vokatra ara-dalàna hananana, ary afaka matoky anao izahay mba hanomezany anao amin'ny vidiny mora indrindra. Mifandraisa aminay anio, ataovy antoka ny filaminana fa hiaro anao ny fiainanao manokana.
2019-05-28 ao amin'ny 2: 39 am
2019-05-28 ao amin'ny 7: 14 am
Na dia teo aza ny fanamafisana ny fanomezam-boninahitra ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miasa.
RAD140 polvo, azo antoka ho an'ny 98% ny pureza. Ny fiantohana azy dia miankina amin'ny fiantohana izay efa nomena azy. Entonces, ¿podrías decirnos cuántos RAD140 quieres?